ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် အကြမ်းဖက်မှုများအတွင်း သံဃာများ ၀င်ရောက်လှုံ့ဆော် စွက်ဖက်မှုကင်းရေး ကြေညာချက်ထုတ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တရုပ်တွေ သပိတ်ရောင်ထအောင် မဲမှောင်နေတဲ့ ဂေါ်ရင်ဂျီကုလားတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာနော် . . ဗမာမတွေနဲ့ ပေးစားလိုက်လို့ ထွက်လာမယ့်မျိုးဆက်က အမျိုးစောင့်ပြီးသားထွက်လာနိုင်မှာလား
ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်စေရန် ဝင်ရှုပ် – ရဟန်းတု ရဟန်းယောင် ဒုဿီလများ ရှိနေခြင်းကြောင့် »
ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် အကြမ်းဖက်မှုများအတွင်း သံဃာများ ၀င်ရောက်လှုံ့ဆော် စွက်ဖက်မှုကင်းရေး ကြေညာချက်ထုတ်
စိုးစိုး ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄
ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ကာ အကြမ်းဖက်မှုများပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမပြုလုပ်ရန် အလေးအနက်သဘောတူကြောင်း ဟူသောအချက်ကို ထုိုင်းနိင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် တတိယအကြိမ်မြောက် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးဆုိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ မှထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်ဟု ယနေ့ထုတ် ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ် သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
“ဗုဒ္ဓရဲ့ သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ သံဃာတွေမှာ သေးသိမ်တဲ့အမြင်တွေ၊ အယူအဆတွေရှိနေတာမဖြစ်သင့်ဘူး၊ကိုယ့်လူမျိုးမှ ကိုယ့်ဘာသာမှစွဲနေလုို့မရဘူး၊အဲဒီလုိုစွဲနေရင် အားလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ရွှေည၀ါဆရာတော်ကမိန့်ကြားကြောင်း လည်းအလားတူသတင်းတစ်ရပ်ကိုဖေါ်ပြသည့် ယနေ့ထုတ် The Voice Weekly တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
ထုိုင်းနိင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၆ ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပသည့်အထက်ပါ အစည်းအဝေးသို့ အာရှဒေသဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအ၀ုိုင်းဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ထုိုင်း၊လာအုို၊ သီရိလင်္ကာ နိင်ငံတုို့မှ သံဃာတော် ၂၉ ပါးတက်ရောက်ကြောင်း အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲအားစီစဉ်ပေးခဲ့သည့် HD Center မှဖေါ်ပြချက်တစ်ရပ်တွင်ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားသည်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများအတွက်အဖြေရှာခဲ့ကြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်ကြီးများက ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ကြောင်း လည်းသိရသည်။
ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် “ကျွနု်ပ်တို့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲတွင် ငြိ်မ်းချမ်းရေးမြှင့်တင်ရန်နှင့် သဟဇာတကျမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိင်ရန်ဆုိုသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိင်ရေးဆွေးနွေးကြရန်အတွက် ကျွန်ပ်တုို့ အာရှဒေသ ဗုဒ္ဓဘာသာအသိုင်းအ၀ုိုင်းက ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဘန်ကောက်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြကြောင်း၊ ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုများပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများမပြုလုပ်ရန် အလေးအနက်သဘောတူကြောင်း၊ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ပုထုဇဉ်များကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ကြရန်တုိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖုို့ရာသဘောတူကြောင်း၊မတူကွဲပြားသောယုံကြည်မှုများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများအကြားတွင်ပိုမိုနားလည်မှုရရှိလာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်သဘောတူကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြားဝင်ဖျန်ဖြေရန် ကိရိယာများကို ဗုဒ္ဓဘာသာအထေက်အထားများနှင့် အညီဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းလာစေရန် အတွေ့အကြုံများကိုဖလှယ်ရန်ရည်ရွယ်ကာ ဤဒေသဆိုင်ရာ ကွန်ရက်များကိုအားကောင်းလာစေရန်ဆောင်ရွက်ဖို့ သန္နိဌာန်ချမှတ်ကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖလှယ်ခြင်းက လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သဟဇာတကျမှု စိန်ခေါ်မှုများကို ပိုမိုနားလည်လာနိင်စေရန်ကူညီနိင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း၊ ဤနည်းလမ်းများအတိုင်း ဓမ္မအခြေခံသဘောတရားများနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားချက်ဆုိုလုိုချက်အမှန်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ပေါင်းစပ်စွမ်းအားကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ”ဟူသောအချက်များကို ထည်သွင်းဖေါ်ပြထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုနေ့စဉ် သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
မြန်မာနိင်ငံတွင် ဘာသာရေးအခြခံအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်မှုများတွင် ၉ ၆၉ ဂိုဏ်းဝင် ဗုဒ္ဓသားတော်သံဃာတော်များ၏အမုန်းတရားဖြန့်လှုံ့ဆော်ချက်များအများအပြားပါဝင်ခဲ့ပြီး ဌင်းတို့အနက် ဘာသာရေးအဓိကရုန်းမှုထောင်ထွက် ၀ီရသူ မှာထင်ရှားသည်။
Myanmar Muslim Media & Agencies
This entry was posted on December 4, 2014 at 1:05 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.